Izindaba - Izizathu Zokusebenzisa Ukubonisa Amakhadibhodi
Abanikazi abaningi bezitolo nezitolo ezidayisa izitolo basebenzisa okokubonisa ngokhuni ukukhombisa imikhiqizo yabo, kepha ukusetshenziswa kwamakhadibhodi pop display nakho kuyathandwa.
Uzobona izitendi zokubonisa amakhadibhodi namashalofu asetshenziswa ngesikhathi semibukiso yezohwebo ngisho nangaphandle kwezitolo ezahlukahlukene njengendawo yokuthenga (POP). Uma uvula isitolo sokuthengisa futhi uzindle ngokuthi hlobo luni lwezinto zokubonisa okufanele ulusebenzise, ​​nazi izizathu eziningana zokuthi kungani kufanele ucabangele ukusebenzisa okwekhadibhodi okukhonjiswa ngamapulangwe ngaphezu kwalokhu okwenziwe ngokhuni: Kuyinto Eguquguqukayo Enye yezinto ezinhle kakhulu ngokusebenzisa ukuboniswa kwamakhadibhodi ukuguquguquka kwayo. Unga-oda ukukhonjiswa kwamakhadibhodi ngazo zonke izinhlobo nobukhulu futhi ufake noma yini oyifunayo ngaphandle kwenkinga. Ngokubheka ukuthi amakhadibhodi lukathayela kuyinto eguquguqukayo kakhulu, ingenziwa ukuze ivumelane nezidingo zakho ngqo ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngenkathi izinkuni zingakhiwa ngobukhulu obuhlukahlukene futhi, inqubo itholakala kuphela ngombono njengoba imishini ngayinye nemishini yokusika kungadingeka ukwenza umkhiqizo wokugcina. Inqubo yokukhiqiza ayinzima kakhulu kepha ibiza kakhulu futhi.
Iyaphatheka uma ufuna ukushintsha ukwakheka nokubukeka kwesitolo sakho ngokuhambisa izinto ngapha nangapha, ungakwenza lokho wedwa ngoba ukuboniswa kukathayela kulula futhi kungahambiseka. Uma unezinto zokubonisa ngokhuni, udinga ukuqasha usizo njalo uma ucabanga ngokushintsha ukusethwa kwesitolo sakho. Ngaphezu kwalokho, njengoba isibonakaliso esiphambili se-counter top e-Abbotsford BC sigoqeka kalula, ungazigcina kalula noma uziyise kwezinye izindawo ukukhushulwa noma imibukiso yomgwaqo.
Kushibhile Njengomnikazi webhizinisi le-newbie, awukwazi ukukhokha imali eningi ekuqaleni. Cabanga ukuthi kungakhokhiswa malini ukubonisa okukodwa ngokhuni bese kukuphindisela kwinani lamashalofu okukhombisa noma ukuma ozokudinga. Isibonisi esiphikisayo esiphakeme e-Abbotsford BC ashibhile futhi sinikezwe ukuthi singanikeza cishe yonke into isethulo sokhuni esingasinikeza, ukusisebenzisa kungaba inketho ebiza kakhulu. Kuyinto eguquguqukayo Ungakwazi ukuguqula kalula ukwakheka okuphelele kwamakhadibhodi okukhombisa ukuhambisana nengqikithi yesitolo sakho isikhathi esithile noma ungalutholanga usizo lochwepheshe. Isibonelo, ngesikhathi sokuthengisa kosuku lwe-valentine, ungamboza zonke izitendi zakho zokubonisa ngephepha elibomvu noma ungeze imidwebo yenhliziyo ecacile ukuze ivumelane nomcimbi. Uma usebenzisa ukukhonjiswa kwezinkuni, ukuziguqula kusho ukuqasha usizo lochwepheshe nokusebenzisa imali eningi.
Njengoba unikezwe izinzuzo eziningi ezichazwe ngenhla, ungasho kalula ukuthi ukubonisa kwamakhadibhodi kungasiza kanjani ibhizinisi lakho. Cabanga ngazo zonke lezi zinto njengoba wenza umqondo wakho, ngakho-ke ekugcineni ngeke uzisole.
Isikhathi Iposi: Mar-01-2021